Saddex qof oo ku dhaawacantay xabbaddo ka dhacay koonfurta magaaladda Malmö | Somaliska
Saddex qof oo ku dhaawacantay xabbaddo ka dhacay koonfurta magaaladda Malmö
Ciidan badan oo boolis ah ayaa caawa fiidkii loo diray deegaanka Holma oo ku taala koonfurta magaaladda Malmö ka dib markii halkaasi laga soo sheegay xabaddo la is weeydaarsaday.
Saddex ruux ayaa la runsan yahay ineey ku dhaacwameen tacshiiradahaas, halka mid ka mid ah uu yahay dhaawac halis ah. Boolisku waxaa ay sheegeen in saacadu markeey aheyd siddeedii iyo toddobo daqiio (20.07), ay dad badan la soo xirriireen iyadoo u sheegay in dukaan ku yaala wadada Hyacingatan uu ka dhacay xabado la isku furay islamarkaasina loo diray dhowr aambalaas oo gurmadka deg dega ah.
Dhinaca kale booliska waxaa ay sheegeen in koox askar ah ay u direen isbaalka si ammaanka loo adkeeyo loona dhageeyso kuwa dhaawacmay, sidaasna waxaa saxaafadda u sheegay Fredrik Bratt, misna hadalkiisa sii raaciyey in aaneey ka war qabin sawirka hanjabaadeed ee dadkaas dhaawacmay ku socda. Waxaa la xiray gebi ahaanba halkii xabaduhu ka dhaceen, iyadoo halkaasina ay baaritaan ka hayaan ciidanka booliska iyo eeyo ay wateen.
Booliska ayaa sidoo kale ku raad joogo dhug dhugleey (mooto) si xowli ah meesha uga baxsatay sida ay dad goob joogeyaal ah u sheegeen booliska. Dhacdadaan caawa Malmö ka dhacday ayaa argagaax gelisay dadka deegaanka oo weli qaarkood dhagahooda ka guuxayaan falalkii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhaca.
Mudooyinkii ugu dambeeyey ayaa magaaladda Malmö waxaa laga soo sheegayey xabado ay oooda iskaga qaadaan kooxaha fal dmbiyeeda gala ee qaarkood dagaal xun ka dhaceeyo is is ugaarsi.
Video: Haween Soomaali ah oo lagu weeraray Boden